Food Truck ပို့ပေးခဲ့တဲ့ Lee Seung Gi (မျောက်လေး) ကတော့ IU နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောလိုက်ပြီနော် !!! - MoviesFan
ဟိုတလောကပဲ IU ရဲ့ ရိုက်ကွင်းကို Food truck ပို့ပေးခဲ့တဲ့ Lee Seung Gi က Interview တစ်ခုမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Junior Artist တစ်ယောက် နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ရမယ်ဆို ဘယ်သူနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ချင်ပါသလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို IU နဲ့အတူ Collaborate လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ Lee Seung Gi က “Junior Artist တွေအများကြီးထဲကမှ IU နဲ့အတူ တကယ်အလုပ်တွဲလုပ်ချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ IU ရဲ့ အနုပညာအပေါ် ထားရှိတဲ့ သူမရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို သဘောကျလို့ပါ။ နောက်ပိုင်း ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို ကျွန်တော့်အတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ရေးပေးစေချင်ပါတယ်” လို့ဖြေထားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Beautiful Moment လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ် ~ “ကျွန်တော် စစ်မှုထမ်းနေတဲ့ အချိန်တုန်းက လာရောက်ဖျော်ဖြေပေးဖို့ PSY ကို ဆက်သွယ်ခဲ့တုန်းက PSY က သူ IU ကိုလည်းပြောလိုက်မယ်လို့ဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့ IU က အလွယ်တကူပဲ သဘောတူလက်ခံခဲ့ပြီး လာရောက်ပေးတာ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ခဲ့တာပါဆိုပြီး” ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ နောက် Album တစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း “Album နဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်ချင်တာတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်။ အားလုံး ready ဖြစ်ဖို့ကတော့ အချိန်ယူရဉီးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ဒီ Album ကို ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲ release လုပ်ချင်ပါတယ်” လို့ဆိုပြီး ပြောပြထားပါတယ်။
A post shared by Leeseunggi.official (@leeseunggi.official) on Jan 30, 2018 at 7:57pm PST
Lee Seung Gi က သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော၊ အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော၊ Variety Programs တွေရဲ့ Entertainer တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော စွယ်စုံရတဲ့ အနုပညာရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေထဲကမှ ဉီးစားပေးအနေနဲ့ ရွေးချယ်ရမယ်ဆို ဘယ်အပိုင်းကို ရွေးချယ်မလဲလို့ဆိုတာကိုတော့ “အားလုံးထဲက တစ်ခုကိုရွေးပါလို့ဆိုတဲ့ ဒီမေးခွန်းက ဖြေဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အပြောင်းအလဲလေးတွေလုပ်ချင်ပါတယ်” ဆိုပြီး ပြောပြသွားပါသေးတယ်။
Lee Seung Gi က tvN ရုပ်သံလိုင်းကနေ ပြသခဲ့တဲ့ ‘Hwayugi’ ဇာတ်ကားမှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ Korean Box Office မှာ million viewers အထိ ကြည့်ရှုနှုန်းများခဲ့တဲ့ ‘The Princess and The Matchmaker’ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်မှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။
ကဲ.. မျောက်လေး နဲ့ IU တို့ရဲ့ Collaboration ကြည့်ရတော့မှာလား? အက်ထမိန်ကတော့မျှော်လင့်မိပါတယ် !!
A post shared by Leeseunggi.official (@leeseunggi.official) on Jan 21, 2018 at 5:32am PST
Previous Post: Running Man ရဲ့ Special Project မှာ Lee Da Hee နဲ့ Hong Jin Young တို့ပါဝင်
Next Post: မင်းသားချောလေး Lee Jong Suk ကို Drama အသစ်မှာ ထပ်ပြီးတွေ့မြင်ရဖို့ရှိနေ